Ukusetshenziswa nokukhethwa kwebhande lesibani
Ibhande lesibani lihlukaniswe ngebhande elincane elinamandla kagesi amancane nebhande elijwayelekile lokukhanya. Kuthiwani ngebhande lokukhanya elisetshenziswe ngenhla? Ngokusetshenziswa komthombo wokukhanya ongaqondile wophahla lwe-floodlight, umthombo wokukhanya owengeziwe ngaphansi kwekhabethe, umthombo wokukhanya owengeziwe kukhabethe nomthombo wokukhanya wokuhlobisa, ...
Ikhono lokukhetha nokufakwa kwebhande lokukhanya kwe-LED
Lapho kuhlobiswa, imvamisa siyabona ukuthi kukhona ibhendi ekhanyayo eholwa ohlwini lokuhlobisa, kepha abanikazi abaningi abazi ukuthi kuyini. Eqinisweni, nalokhu kujwayelekile kakhulu. Okokuqala, akukho ukuxhumana okuningi. Okwesibili, ngoba ibhande lokukhanya lifihliwe, sibona ukukhanya kwalo kuphela, kepha asikwazi ukubona isithunzi salo. Ku ...
UJoineonlux ugxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemichilo ye-LED. Ithole udumo kumakhasimende aphesheya futhi yaheha nokunaka okubanzi. Amatafula anempilo, anomsindo futhi anomsindo. Amakhasimende amaningi akhulume ngemininingwane esetendeni, futhi kunamathuba obushushu ...
UZhongshan Joyeonlux uneminyaka engu-17 enolwazi futhi ubelokhu ehambisana nobuchwepheshe besimanje ngokuya ngekhwalithi yomkhiqizo, ukuthengwa kwamakhasimende nokwakhiwa komkhiqizo. Kubalulekile ukusho ukuthi sinaka umklamo olula wokuphepha nekhwalithi. I-Joyeonlux inikeza amakhasimende ngokuhlukile ...
Isibonelo, isibani somucu oyisicaba kanye nesibani esiyisicaba esihlukanisiwe singahlukaniswa ngezinhlobo ezintathu, okungukuthi i-LED ejwayelekile, isibani somugqa osicaba, kanye nesibani somugqa osicaba.
1. Umugqa wokukhanya we-Flexible LED uhlanganiswe ne-FPC ne-SMD LED, ukuze ubukhulu bomkhiqizo bube kuphela ubukhulu bohlamvu lwemali, futhi bungathathi isikhala; imininingwane ejwayelekile ifaka ama-LED angama-18 anobude obungu-30cm, ama-LED angama-24 nama-LED ayi-15, ama-LED angama-24 nama-30 angama-LED anama-50c ...
Yiziphi izinyathelo zokuphepha zokufakwa kwebhande elikhanyayo le-LED
Inothi lokufakwa kwebhande elikhanyayo le-LED: indlela yezintambo zebhande elikhanyayo le-LED. Amandla kagesi ejwayelekile ebhande elikhanyayo le-LED yi-DC 12V, ngakho-ke ukushintsha ugesi kuyadingeka. Usayizi wokunikezwa kwamandla kuncike ebangeni lamandla nokuxhuma kwebhande elikhanyayo le-LED. Ukuxhunywa kwemono ...
Ukukhethwa kwebhande lokukhanya kwe-LED kuya ngenhloso yokufaka nokukhanyisa
Umehluko phakathi kwe-high-voltage light belt ne-low-voltage light belt yilezi: i-high-voltage light belt ngokuvamile imitha engu-50/100 yemitha, i-voltage light belt ngokuvamile imitha engu-5 roll, ibhande lokukhanya elinamandla amakhulu alinamanzi, i-low voltage ibhande lokukhanyisa alinamanzi noma cha, isibani ...